दरबार हत्याकाण्डको १७ वर्ष पूरा, राजतन्त्र हट्यो शंका हटेन ! – SamajKhabar.com
दरबार हत्याकाण्डको १७ वर्ष पूरा, राजतन्त्र हट्यो शंका हटेन !
संबाददाता : Samaj Khabar प्रकाशित मिति: १९ जेष्ठ २०७५, शनिबार ०३:३३
काठमाडौं । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाश भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ। २०५८ जेठ १९ गते राति राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुनेगरी भएको हत्याकाण्ड भएको थियो।
शुक्रबार राति नारायणहिटी दरबारको त्रिभुवन सदनको विलियार्ड बैठकमा भएको पारिवारिक जमघटका बेला राजा वीरेन्द्रसहित रानी एेश्वर्य राज्यलक्ष्मी, छोरा युवराज दीपेन्द्र, छोरा राजकुमार निराजन र छोरी राजकुमारी श्रुति मारिएका थिए।
घटनामा वीरेन्द्रका भाइ राजकुमार धीरेन्द्र, बहिनीहरू राजकुमारी जयन्ती, राजकुमारी शान्ति, राजकुमारी शारदा, र ज्वाइँ कुमार खड्गलगायत राजपरिवारका अन्य सदस्यहरूको हत्या भएको थियो। राजा वीरेन्द्रको निधन भएपछि अस्पतालमा रहेका तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रलाई राजा घोषणा गरिएको थियो।
जेठ २२ मा उनको मृत्युको घोषणा गरिएसँगै वीरेन्द्रका माइला भाइ ज्ञानेन्द्र राजा बनेका थिए। उदार राजाको छवि बनाएका वीरेन्द्रको वंशनाशपछि ज्ञानेन्द्रले त्यो छवि कायम राख्न सकेनन्। परिणामस्वरूप नेपालमा राजतन्त्र धेरै समय रहेन। हत्याकाण्डको सात वर्षपछि २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्रको समाप्ति भई गणतन्त्रको उदय भयो।
उच्च सैन्य घेराभित्र रहेको नारायणहिटी राजदरबारमा भएको हत्याकाण्डको रहस्य अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश, सभामुख सहभागी उच्चस्तरीय छानबिन समितिले सो घटनाको दोषी दीपेन्द्रलाई देखाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। देवयानी राणासँगको प्रेमका कारण युवराज दीपेन्द्रले हत्याकाण्ड मच्चाएको प्रतिवेदनको सार थियो।
१९ जेष्ठ २०७५, शनिबार ०३:३३ मा प्रकाशित